ဘုရားသခင်ကသာငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဆွေးနွေးတတ်, တစ်စုံတစ်ဦးကအကြောင်းငါနှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပင်. ကျွန်တော်တို့အငြင်းပွားစရာကိစ္စများအကြောင်းပြောနေတာတ​​ဲ့အခါ conversations သော်လည်းအထူးသဖြင့်စစ်မှန်သောတင်းမာနေမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာရနိုင်. ဒါဟာသင်သည်သူတို့မှားထင်ပါတယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြရန်ပျော်စရာဘယ်တော့မှဖွင့်. ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့စကားနှင့်သတိထားရန်ကြိုးစား, နှင့်ရိုးရိုးဘုရားသခငျသညျအဘယ်သို့မိန့်ထောက်ပြ, အစားငါ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ထက်. မရောက်လိုပဲ, သော်လည်း, စကားဝိုင်းမှာစဉ်အတွင်းတစ်ချိန်ချိန်, သူတို့အသောတံပိုးမှုတ်ကတ်ကိုဆွဲထုတ်မယ်: "ဒါပေမယ့်ကမျြးစာကိုလည်းစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်မဆိုပါဘူး? သငျသညျအဆင်သင့်သောကြောင့်ကျမ်းပိုဒ်ကျော်ကျော်သွား, ဟမ်?"ဒါဟာပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှ.
မဿဲခုနှစ်တွင်7ယရှေုသညျကပြောပါတယ်, "စစ်ကြောစီရင်တော်မူမနေပါနဲ့, သို့မဟုတ်သင်အရမ်းစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ "ကမျြးစာကိုစကားလုံးသည်မိမိတရားဟောချက်စကားလုံး၏ဤအပိုငျးကိုးကားနိုင်ဖတ်ဖူးပါဘူးတဲ့သူတောင်မှသူတို့အကို. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလ၌အများဆုံးလူသိများတဲ့ကျမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ. ထိုသို့ကိုလည်းအများဆုံးလွဲစေခြင်းငှါ
ဤကျမ်းပိုဒ် Misunderstanding ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရထင်နေပုံကိုနားလညျမှုလှဲမှားဆိုလိုသည်. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမေးခွန်းမေးမြန်းကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်: သူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ဖို့မကိုဖျောပွသညျ့အခါယရှေုသညျအဘယျသို့ဆိုလိုပါဘူး?
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ, ဇနီးနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ Nook နှင့် cranny မှတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်, ကျနော်တို့ကောင်းသောဆွေးနွေးရန်ခဲ့, မကောင်းတဲ့, နှင့်အရုပ်ဆိုး. ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားပေးဖို့မြောက်မြားစွာအခွင့်အလမ်းတွေကိုခဲ့, ငါတို့မူကားလည်းချို့ယွင်းချက်ထောက်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုခဲ့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွင်းမှာတော့, ငါ့မယားငါတိုတိုကျသွားတာပါနေရာတွေမှာမြင်ရဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့, ငါမဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ညျမတ်ေတာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာ. သူမသည်ငါ့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူဖို့မသညျယရှေု command ကိုမနာခံခဲ့သည်? ငါဒါမစဉ်းစားကြဘူး.
ယရှေုသညျမဆိုကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်ပိုင်တော်မူ၏လုပ်မှားင်မဆိုလိုနိုင်. အနည်းငယ်ကျမ်းပိုဒ်နောက်ပိုင်းတွင်, ယရှေုသညျသူတို့နှင့်အတူအမှနျတရားကိုဝေမျှသောသူအကြောင်းတရားစီရင်စေခြင်းငှါသူ၏အနားဆင်ကိုပြောတယ်. ထိုအခနျးငယျ 15 တူညီတဲ့အခနျးကွီး၏, ယရှေုသညျပရောဖကျမြားဖွစျဖို့တောင်းဆိုသောသူတို့သည်တရားစီရင်တော်မူစေခြင်းငှါနှိုးဆျော, သူတို့စစ်မှန်စွာဘုရားသခင်ထံမှစကားမပြောတတ်လျှင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့သိုးအဝတ်အစားအတွက်ဝံပုလွေဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်. မဖော်ပြကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများကိုအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာထားကျမ်းစာ၌အတွက်မြောက်မြားစွာသည်အခြားကျမ်းပိုဒ်. ယရှေုသညျအားလုံးတရားသဖြင့်စီရင်မှားယွင်းသည်ဟုပြောမဆိုလိုပါ. ထိုအခါငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူရိုးသားဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုဆိုလိုဘူး.
လူအတော်များများသငျသညျမညျသူမဆိုကိုစစ်ကြောစီရင်ဘယ်တော့မှသင့်ကြောင်းအခိုင်အမာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကယ့်ကိုမယုံကြဘူး. သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်၏ရှေ့မှောက်၌ dope ရောင်းမူးယစ်ဆေးကုန်သည်တွေအပေါ်ရဲများကမခေါ်မှားင်စဉ်းစားကြဘူး. ထိုသူတို့ကဆက်ဆက်ကြောင့်လောဘကြီးတရားဟောဆရာကသူတို့ပိုက်ဆံတောင်းစားစတင်သည်အခါတီဗီကို turn off မှားင်စဉ်းစားကြဘူး. ထိုအခါအမြီးအမောက်ရှိရဲ့. သငျသညျစီရငျဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကမှထွက်မခေါ်ရတဲ့အခါ, သင်အမှန်တကယ်အဲဒီလူကိုအကြောင်းကငျြ့ဝတျတရားသဖြင့်စီရင်အောင်နေ. ဤအမှုအသီးအသီးအတွက်, တရားစီရင်ပိုင်တခြားသူတွေရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လျက်ရှိသည်.
သေး, တရားသဖြင့်စီရင်အိမ်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအနီးကပ်ရိုက်သည့်အခါ, ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်မှားင်. ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. တရားစီရင်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်များမှာ? ရဲ့သူမတရားသူကြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဖျောပွထားသညျ့အခါယရှေုသညျကိုဆိုလိုတာအဘယ်သို့သောအကြောင်းထင်စေ.
ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးထဲမှာစကားလုံးတရားသူကြီးကိုသုံး. ကျနော်တို့အခွက်တဆယ်ပြပွဲစီရငျသို့မဟုတ်တရားရုံးအမှုစီရငျအကြောင်းပြောနေတာနိုင်. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာတွေအများကြီးဆိုလိုနိုင်. အလားတူပင်, ယရှေုက "တရားသူကြီး" အတွက်အသုံးပြုသည်ဂရိစကားလုံးကအမြဲတမ်းတူညီသောအရာမဆိုလိုပေ. ကျွန်တော်တို့ကသူဓိပ်ပာယျကိုနားလည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းပိုဒ်၏ကျန်မှာကြည့်ရှုရန်ရှိသည်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာ၏ကျန်.
သင်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုဆက်လက်အဖြစ်, ယရှေုသညျတရားဆုံးဖွတိကျတဲ့အမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်. သူတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့မျက်စိထဲမှာ sawdust တစ်ဦးအစက်အပြောက်သတိပွုမိသူတစ်ဦးသည်လူတစ်ဦး Hilary image ကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်အလွန်ကြီးမားသောမှတ်တမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှု. ဒါကသင့်ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီထဲမှာအပေါက်ဝေဖန်နေတဲ့အဝတ်အချည်းစည်းသောသူကဲ့သို့င်. ယရှေုသညျတရားသဖြင့်စီရင်၏မည်သည့်အမျိုးအစားရှုတ်ချသည်မဟုတ်; သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်ရှုတ်ချင်, ခွေုံတရားစီရင်ပိုင်.
ကျမ်းပိုဒ်များတွင်5သူကပြောပါတယ်, "သင်အဓမ္မ, ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်စိ၏ log ယူပါ။ "ကျနော်တို့ကိုအခြားသူများစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမပြုမီ, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်စစ်ကြောစီရင်တော်မူရပါမည်. လျှို့ဝှက်သောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလျစ်လျူရှုကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းဖို့လူကိုင်. ထိုအ Self-ဖြောင့်မတ်ကလူကိုသင့်အပြစ်အနာအဆာကိုထုတ်ညွှန်ပြဘို့အထူးဆုကြေးဇူးကိုရှိစဉ်, မိမိတို့မေ့မေ့လျော့လျော့နေ. ယရှေုသညျတဲ့ပြဿနာရဲ့အကပြောပါတယ်. ထိုမင်းသည်ဘုရားသခင့ပြန်လာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မည်ကိုဖျောပွ.
ကြမ်းတမ်းစွာအခြားသူများကိုအပြစ် တင်. နှင့်သင့်ဘဝပြီးပြည့်စုံလျှင်အဖြစ်သူတို့အပေါ်မှာရပ်တည်ရန်ရယ်စရာဒါဟာင်. ဘုရားသခင့သန့်ရှင်းသောလက်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောတရားသူကြီးဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ညစ်ပတ်ပေရေလူမျိုးဖြစ်ကြ၏, ထိုရေချိုးခန်းမှအသီးအသီးအခြားညွှန်ပြ.
သငျသညျသူကပြောပါတယ်ဘယ်တော့မှသတိထားမိမှာ, "ဟုအဆိုပါမှတ်တမ်းကိုထုတ် ယူ., နှင့်အခြားလူရဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။ "သူဟာတကယ်ကပြောပါတယ်, "ပထမသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိထဲကမှတ်တမ်းယူ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုမျက်စိထဲကအစက်အပြောက်ယူရှင်းလင်းစွာမြင်ပါလိမ့်မယ်။ "သူကကိုယျ့ကိုယျကိုဆနျးစစျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြမယ့်, ပြီးတော့အထဲကအစ်ကိုကိုကူညီ.
ငါ့ကိုအသင်၏အသက်တာအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိဖို့အတှကျဒါဟာမတ်ေတာမဲ့င်, ဒါကြောင့်အဲဒီမှာမယ့်တူပေမယ့်လျစ်လျူရှုရန်. အဘယ်ကြောင့်ငါကိုချစ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအဖျက်ထုံးစံ၌အသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်ပါစေလိမ့်မယ်? ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ကြလျှင်, ဒါကြောင့်နှိပ်စက်တာလျှင်ပင်ငါသည်သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားပြောပြလိမ့်မယ်. သို့သော်ထိုသို့ဘုရားသခငျ့စံပေါ်တွင်အခြေခံထားရပါမည်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်. ငါသည်သင်တို့ပြုအတူတူပင်ကျေးဇူးတော်လိုအပ်ပါတယ်အသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးနှိမ့်ချကိုယ်ဟန်အနေအထားကနေလုပျဆောငျဖို့ရှိသည်.
မဿဲစကားကိုနားထောငျပါ 7:1. သို့သော်ဂလာတိအကြောင်းမမေ့မလြော့ပါ 6:1: "ညီအစျကို, တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအပြစ်၌ဖမ်းမိလျှင်, ဝိညာဏနေသောသင်တို့ကိုညင်ညင်သာသာသူ့ကိုပြန်ပေးသင့်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအသီးအသီးအခြားလိုအပ်.
MrAveryBrown • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 12:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အားပေးခြင်း. ယုံကြည်မှုများ. အတှေးအ. ရဲ့နှလုံးသားများထုတ်စစ်ဆေးပါစို့, ဒီ concept ကိုသင်ယူဖို့ကြိုးစားကြသည်, နေ့စဉ်နှင့်ကလျှောက်ထား.
စတိဗ် • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 4:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသောစကားလုံး, ခရီးစဉ်ကို. အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့, အခြေအနေကဒီအမျိုးအစားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူတို့အဘို့အထောကျအကူလျှောက်လွှာ. ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို…
esteban Ramirez • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 12:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီအကြောင်းကျမ်းပိုဒ်၏အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျငါသညျဤအတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြအစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့အစ်ကိုကိုသင်လုပ်နေတာဘာလုပ်နေစောင့်ရှောက်!
ချားလ်စ် • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ၏အသင်းအုပ်ဆရာရုံတစ်ပါတ်အကြာကဒီကူးကြ၏အမျှငါ့စိတျထဲမှာလတ်ဆတ်ဖြစ်ပါသည်. သင်းအုပ်ဆရာဘရိုင်ယန် Said “သငျသညျဂရိကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဖတ်လျှင်တရားသူကြီးကိုသင့်လျော်သောစကားလုံးမဟုတ်။” သူကပိုကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်ချက်ပါပြီမယ်လို့ပြောသွား “တစ်တရားသူကြီးအဖြစ်ဏျပါဘူး” ဒါမှမဟုတ်တရားသူကြီးများကဲ့သို့ပြုမူ (အဟောင်းကို testement စတိုင်). နေကြပါတယ်စီရင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဝါကျဖြတ်သန်း2ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ.
MimiRivera • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Aint nothin ပေမယ့်အမှန်တရား :) အာမင်အစ်ကို.
ယာရက် • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကအခုဘဝမှာတကယ်အသုံးဝင်သည်. ငါမကြာသေးမီကယုံကြည်သူမဟုတ်သူကိုငါ့အဘွားနှင့်အတူဆွေးနွေးမှုရှိခြင်းခဲ့တာ, ငါသူမကိုဘုရားသခင်၏မေတ္တာကိုပြသဖို့ကြိုးစားနေတာ. ငါသူ့ထံသို့ကျွန်မအပြစ်ဝန်ခံနှင့်သူမ၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အမေးပါလိမ့်မယ်, သူမခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သူမကကျနော်အခြို့သောအမှုအရာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းကို rant ပါလိမ့်မယ်. ငါရှိသောကြောင့်ငါပြီးသားဘုရားသခင်ထံမှခံစားရခံယူချက်၏မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြ, သူမကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပြစ်တရားကိုမမွငျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုနည်းနည်းနှောင့်အယှက်. သူမသည်ကိုယ့်ငါ့ကိုဖြိုဖျက်. ကျွန်မသူ့ကိုပြုံးနှင့်ကိုချစ်. ငါသည်ငါ့မိသားစုမေတ္တာရှင်အတူကိစ္စများရှိသည်နားလည်, ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြစ်တရားအသိအမှတျပွုပါဘူးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအတွင်းပိုင်းငါ့ကိုနှောင့်အယှက်များနှင့်သတ္တုတွင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ဒီတော့အမြန်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်မှာသော်လည်းအချို့အကူအညီနဲ့ဖြစ်ပါသည်. ကြေးဇူးတငျစကား
Ezra_of_Israel • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကောင်းသောကြောင့်ချပြီးလမ်းနှင့်ကျမ်းစာ၌ပါသောအာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ. အချစ်ဆိုတာဘာလဲ? ငါ ...... woah ရိုးရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြုန်းခဲ့ပြီးပြီ
PastorBenJohnson • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ညာဘက်အပေါ်! ဒီနှင့်အတူသွားကြဖို့, ပေါလုကပြောပါတယ် 1 ကောရိန္သု 5:12: “အဆိုပါဘုရားကျောင်းအပြင်ဘက်တွင်သူတို့အားတရားစီရင်တော်မူရန်သတ္တုတွင်း၏ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်? သငျသညျသူတို့အားအတွင်းပိုင်းကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါမဟုတ်။”
ခရစ်တော်အားတာဝန်ခံ၌အကြှနျုပျတို့၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မကျင်းပရန်ယုံကြည်သူများသောကြောင့်အလုပ်က. ဒါပေမဲ့, ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်လျှောက်လုံးကိုယျ့ကိုယျကိုဆန်းစစ်ဖို့လို! ဂရိတ်ဘလော့ဂ်ခရီးစဉ် Lee က!
harryyeboah • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! အများကြီးသင်ယူ. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။.
EboniRenee • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Beautifulluy & thoughtfully ထား. ကျနော်တို့ကဒီလိုအပျ.
တိုနီ • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်, ဒီမှန်ကန်စွာနားလည်ရန်ကျမ်းစာ၌ပါသောအာအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သငျသညျဈစဉ်းစားခဲ့ကြသောအရာကိုစကားလုံးများကိုသို့သွင်းထားပြီ. ငါလူငယ်သင်းအုပ်ဆရာတယ်, နှင့်ဤ Ive အကြောင်းကိုငါ့အကျောင်းသားတွေနဲ့အတူစကားပြောလိုသောခဲ့တာအရာတစ်ခုခုသည်. ငါသည်ဤ post ကိုအသုံးပွုရရန်သေချာစေပါနှင့်ဤအချက်များအပေါ်ကိုချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်. နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်ပြုသောသူအပေါင်းတို့အဘို့နှင့်ပြုတော်မူမည်. ငါသည်ဘုရားသခင်၏သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုဆက်လက်ဦးမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့.
ယ်စလီ • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို. ငါကလူဒါပင်ပန်းတယ် [ခရစျယာရှေ့တန်းမှမှာ, အခွားသူမြားစှာနှင့်အတူ] ကအားလုံးကိုမည့်ဟန်ရှိပါသည်တူသောဤကျမ်းပိုဒ်ပစ် ချ.. ဒါဟာ ________ ထဲက get အခမဲ့ကဒ်အဖြစ်အသုံးပြုမယ့်. စာရေးဆရာဟုခဲ့သည်မဟုတ်မှာအားလုံးဘယ်အရာကို. ပီသသောအဘို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
မွကျခွောကျ • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤနေရာတွင် Awesome ကိုသင်ကြားရေး. အစဉ်မပြတ်ငါသင့်ရဲ့ပို့စ်များအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ့. ငါသည်သင်တို့ကိုသူမလမ်းကို အသုံးပြု. အတှကျဘုရားသခငျကိုကြေးဇူးတငျ. သင်ရုံဂီတလုပ်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်တရားဟောစဉ်မြင့်ရှိရာကိုမှ.
ရှာရုန်ကို C. ဂျိမ်း • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီအတွေးမျှဝေဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့၏ပို့စ်ကိုဝေမျှနှင့်အများအပြားကဤသူတို့၏နဖူးစည်းစာတန်းရာ၌ခန့်ထားပြီကြောင်းကိုဆုတောင်းပဌနာပါလိမ့်မည်, ခရစျတျောကအဓိပ်ပာအဖြစ်အတိအကျနားလည်, အဖြစ်ဂလာတိ 6:1. မင်္ဂလာရှိသောနေပါ.
Christoph • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါယောဟန်ယရှေုကိုပြန်ကိုးကားလို 7:24 – “ဖြောင့်မတ်တရားသဖြင့်စီရင်အတူစစ်ကြောစီရင်တော်မူ။” ဒါကသူကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့အခွင့်အလမ်းသို့ကန့်ကွက်နှင့်ဆောင် disarms, သင်သည်သင်၏ပို့စ်တွင်ပြုသကဲ့သို့.
Gloglo • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
MJ • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသောစကားလုံး. ကျနော်တို့ကိုအပြစ် တင်. မရသင့်သောစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ, ဒါပေမယ့်တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူနိုင်မည်. ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ငါသူသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအကြောင်းကိုတစ်ခုခုပြောနိုင် “တက် shacking” ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအတွက်, ငါကလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မခွေုံဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး.
မာကုဘုရင်က • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီခရီးစဉ်အပေါ်သွားမယ်လို့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒီမျိုးဆက်ဟာအလွန်အရေးကြီးသောဘာသာရပ်ဖြူဖြစ်ပါသည်. ဒါအများကြီးရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတည်ရှိ. သငျသညျအထဲကထောက်ပြသည့်အမြီးအမောက် Love, လွန်း.
ငါပြဿနာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီတရားအမြင်ကြည့်ရှု. ကျွန်ုပ်တို့၏ယှဉ်ပြိုင်မှာသဘောသဘာဝလမ်းလျှင်ငါတို့သည်အချို့သောဖုန်ထဲမှာမှားကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတစ်စုံတစ်ဦးကလညျးပွော၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင်းကိုစဉ်းစားစကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စား. ကျွန်တော်တစ်ဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာအမူအရာအတိုင်းဤတွေ့မြင်လျှင်, ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပြောင်းလဲနေသောအပေါ်ကြာ.
ငါဖမ်းမိကြောင်းတစ်ခုမှာပိုပြီးအရာ… သငျသညျကလူရောထွေးနိုင်မယ့်လမ်းအတွက်ဒီတစ်ခုအထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် phrased. သင်ပြောသည်, ” ယရှေုသညျမ “ဆိုလို” အားလုံးတရားသဖြင့်စီရင်မှားယွင်းနေသည်ဟုပြော. ထိုအခါငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူရိုးသားဆိုရင်, ကျွန်တော်မ “ဆိုလို” ကြောင်းဖြစ်စေ.
ရုံရှင်းလင်းပြတ်သားဘို့အလိုငှါ, ဖြစ်ကောင်းထားသောစာပိုဒ်တိုများဤပိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်း “ယရှေုဟုအတိုင်းဤအနက်ကိုဘော်ပြမနေသင့်” အားလုံးတရားသဖြင့်စီရင်မှားယွင်းနေသည်.
အမြန်မှတဆင့်ဖတ်ပါတစ်ဦးက, နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ကဒီကိုဖတ်ရှုခြင်းမှသွားရစေခြင်းငှါ,, “အိုး, ယရှေုသညျဟုမဆိုလိုခဲ့ပါဘူး?” ငါသညျယရှေုကိုယျတျောကအတိအကျအဘယ်သို့ဆိုဖို့ရည်ရွယ်အတော်လေးသေချာပါတယ်လိုက်တဲ့အခါ. ဒါဟာအနက်အတွက် ll ရဲ့.
ငါသည်သင်တို့ကိုအဓိပ်ပာယျအရာကိုသိ. ကိုယ့်အမြင့်ဆုံးလျှင်စာပေစံချိန်စံညွှန်းများရန်သင့်အားကိုင်ပြီး. ငါကပြောသည်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ယုံကြည်စိတ်ချ.
သင့်ရဲ့အလုပ်လေးမွတျ (အားလုံးကလျှင်, မရင့်ဂီတ)! အစ်ကိုကြိတ်သိမ်းဆည်းထားပါ!
ပေး • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
anajcruz • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 2:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ်ကဒီကိုခစျြ!! တကယ် insightly, အားတက်စရာ, aaaand ယုံကြည်မှုများ!!!
ကအချင်းချင်းချစ်ရဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သတိပေးချက်!! ကျေးဇူးတင်စကားအစ်ကို! ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!!
ဖေါ်ပြ: ဘုရားသခင်ကသာငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်? (BuilttoBrag.com ဘလော့ဂ်၏ခရီးစဉ် Lee က) | Ron "Big Black" Garrett
WayneChristian • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 3:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သာသညျယရှေုပိုကောင်းကပြောသည်! ခရီးစဉ်ကိုသင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေတဲ့အသက်ရှုများမှာ! သင့်ရဲ့လုံ့လဝီရိယအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ကောင်းပြီအမြဲအဖြစ်စာဖြင့်ရေးသား! ဘုရားသခငျသညျငါ့အစ်ကိုမြန်စေ!
JosiahCarter • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 7:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့! ဒီစာရေးဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ဤသည်ဤမျှလောက်နောက်ကျကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအပေါ်ခဲ့သည်, ငါစကားလုံးတွေ့မြင်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ “တရားသူကြီး”. ကျနော်ကျိန်းသေဒီမျှဝေတာပါ!
ဒါဝိဒ်သည် • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 8:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ထိုကျမ်းပိုဒ်၏အရှိဆုံးတိကျဖော်ပြချက်တစ်ခုမှာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကငါသိမြင်သည်ဟုဆိုလိုသည်. အခြားစကားပြောသည့်အခါတိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားမျက်စိမှတဆင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်သင့်တယ်.
carlosAviles • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 8:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်အားတက်စရာ. ထိုအခါငါကြိုးစားကျရှုံး. ငါအခြိနျမှနျမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖမ်းခြင်းနှင့်ငါငါပြောမတိုင်မီပထမဦးဆုံးအတွင်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုပြန်မရကူညီသင့်ကိုသိရ.
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ် Lee က.
modallas • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 1:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့် dis နှင့်အတူရုန်းကန်င့်. အခုတော့ကိုယ့်ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုတယ်!!!
modallas • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 1:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုးကား • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 6:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာကျနော်တို့လုသောငါတို့ညီအစ်ကိုများ၏တရားသဖြင့်စီရင်အထောက်အကူဖြစ်စေသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောစေသည်ဆိုသညျကားအဘယျသို့နောက်ကွယ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကင်. ကျွန်မစဉ်းစားနေပါတယ်, “သင်သည်အဘယ်သို့လုပ်နေလုပ်နေမှားယွင်းနေသည်! ကမျြးစာကိုနိုင်အောင်ကပြောပါတယ်. သင်က fix ရန်လိုအပ်ပါတယ်…” သို့မဟုတ်ထိုသို့, “ဒါကဂုဏ်နအကြောင်းမရှိနာကျင်မှုရဲ့နဲ့ကျွန်မတူမယ့်အရာကိုသိ. ငါသည်သင်တို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အကြောင်းမလိုချင်ကြဘူး…”
ဒါဟာကျနော်တို့ညာဘက်တရားစီရင်ပိုင်စေရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ပိုင်းခြားသိမြင်ထားဖို့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မတိုင်မှီကိုယ်တော်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရပါမည်, နေစဉ်အတွင်း, နှင့်အပြီး!
လုပ်နောက်ထပ်ကောင်းသောအချက်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့သည်ငါတို့နှလုံးညာဘက်အရပ်၌ရှိလျှင်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားမထောင်ကြလိမ့်မည်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှင့်ငါတို့ညီအစ်ကိုတွေကိုမရောက်မီ authentication နထေိုငျမရင့်လျှင်.
အသက်ငယ်သော • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 7:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Ive ယခုခဏတစ်ဘို့ဤအတူရုန်းကန်ခဲ့. သို့သော်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုအကြှနျုပျကိုခံစားရစေတော်မူပြီ 10 အရင်ကထက်အဆပိုကောင်း. ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်! ဘုရားသခငျသညျညီအစျကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
NDT • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 8:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Excellent ကဆောင်းပါး! “သူတို့ရဲ့အသီးအားဖြင့်, သငျတို့သညျသူတို့ကိုသိရကြလိမ့်မည်။” ရှင်းနေသည်မှာထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုအခြားသူများကိုပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ပညတ်ဖြစ်ဖို့ဘာ – အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ကျနော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြွေးကြော်လာသောအခါ, ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြောင့်အပြစ်တရားမှတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်ထံမှကွဲကွာဘယ်လိုရှင်းပြနေသည် (တစ်ဦးကငျြ့ဝတျတရားသဖြင့်စီရင်င်!) ထိုအခါမှသာယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းကိုကြွေးကြော် (လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်သင်္ချိုင်းတွင်းဖွအပေါ်သူ၏ရှေးနုအလုပ်) ဘုရားသခင်ထံမှလူသားရဲ့ခွဲခြာမှအဖြေဖြစ်ပါတယ်, ခမညျးတျော! ဧဝံဂေလိတရားကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပါလျှင်မပြည့်စုံဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားထုရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောအနေအထားထွက်စွန့်ခွာ (ပညတ္တိကျမ်းကိုအစီရင်!) သို့သော်ထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကမ်းလှမ်း. ယောဟနျသနယူတန်ရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်, “တစ်ခါတုန်းကပျောက်ဆုံးသွားသောခဲ့သည်, ယခုမူကားကိုတွေ့ပါ၏!”
Tatenda • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 10:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင် bro. ငါဇင်ဘာဘွေမှာနေထိုင်နှင့်ကျမ်းပိုဒ်ကဒီမှာပင်ရေပန်းစားသည်!!! ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းနှင့်ငါနထေိုငျကြသည်မဟုတ်သူကို Non-ယုံကြည်သူများနှင့်ခရစ်ယာန်ညာဘက်ဆုံးမပဲ့ပြင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဒိုင်းလွှားအတိုင်းဤကျမ်းပိုဒ်ကိုအသုံးပြုဖို့သတိရဖို့ဂရုစိုက်ထက်ငါပိုပြီးအဆသတိပြုမိကြပါပြီ. ဒါဟာဝမ်းနည်းင်, တကယ်ဝမ်းနည်း…
ဘရူနို • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 11:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တောမြိုးစေ့ • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 3:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအပြည့်အဝမဿဲနှင့်အညီစီရင်တော်၏အနက်ကိုသဘောတူ 7. ငါသည်လည်းခရစ်ယာန်များသည်သကဲ့သို့ငါတို့သည်မဟုကထည့်သွင်းဖို့လိုခငျြ “တရားသူကြီး” ကမ္ဘာကြီးကိုသို့မဟုတ်ခရစ်တော်အားသူတို့အားမပေး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ “တရားသူကြီး” ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကျောင်း. ဘုရားသခငျသညျသူသညျမိမိကပြောပါတယ် “တရားသူကြီးတွေ” ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်မကျွန်တော်တို့ကိုမိမိသားသမီး. 1 ကောရိန္သု 5:12-13
ဖေါ်ပြ: ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသူများကိုစစ်ကြောစီရင်အပေါ်ခရီးစဉ် Lee ကကနေပုဒ်မ « 360လူငယ်
စတီဖင် • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 5:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kate • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 7:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ ~ ငါစီရင်တော်ပေါ်မှာဤတနင်္ဂနွေတရားကိုဟောနေပါတယ် (သို့မဟုတ်မအရမ်းရယ်ရတယ်) ငါ / ကြှနျတေျာ့တရားဟောချက်သို့သင်တို့၏အကြံအစည်အချို့ paste ကူးယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအံ့သြနေပါတယ်? ကြေးဇူးတငျစကား! ကိတ်
Clayton • နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 10:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်လေးနက်တဲ့, ဘုရားသခင့ bro ကောင်းကြီးပေးတော်မူ
ဖေါ်ပြ: နံနက် Mashup 11/14 | ဓမ္မ Matters
ဖေါ်ပြ: HACM အပတ်စဉ် Roundup [11/15/13] | ဟားဗတ်ရိပ်သာလမ်းကောလိပ် / အလုပ်ရှာဖွေရေးန်ကြီးဌာန
ရှုံးနိမ့် • နိုဝင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 1:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ: LIKE ခရစ်ယာန်တစ်ဦးလဲဆိုတာပါဘူး? | ဆိုးလ်မြို့မှာရှိတဲ့ Soul ရှာဖွေခြင်း
Tyler • နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 1:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤမျှလောက်ဒီပို့စ်တင်ဘို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်ဤသတင်းစကားကိုနားထောငျဖို့အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံအတွက်ခရစ်ယာန်များအတွက်ဒါလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ထင်. ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသနားခြင်းကရုဏာစိတ်အတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပျကွောငျးဒေသများ addressing ကိုဆိုလိုသည်ဖို့ယရှေုငါတို့ကိုခေါ်လမ်းကိုမေတ္တာရှင်စတင်ရန်လိုအပ်.
pelumi • နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kathryn • နိုဝင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 8:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မအမှန်တရားတစ်ခုဖွင့်လှစ်နှလုံးရပါလိမ့်မယ်ဆုတောင်း ကျေးဇူးပြု.; ငါကသိကြလိမ့်မည်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုသတ်မှတ်စေခြင်း; ငါသညျယရှေုကိုယုံကွညျခွငျးနှငျ့ငါ့အပြစ်တရား၏အလိုငှါနောင်တရပါလိမ့်မယ်ကြောင်း. ငါသည်သူ၏ကျေးဇူးတရားကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ငါသည်ငါ့လိုအပ်ချက်အားဖြင့်ပေမယ့်အပြစ်တရားအားဖြင့်မှားမည်မဟုတ်ပါကြောင်း. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Elvis • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2013 တွင် 11:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီစကားလုံးဝေမျှဖို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းမရှိ….ယင်း၏ reaaly မျက်စိသင်ရုံကဤဘလော့ဂ်ခရီးစဉ်ကပြောသည်ဘယ်အရာကိုဖွင့်လှစ်…အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနက Continue (သူတို့အားလုံး)..
ဖေါ်ပြ: ခရီးစဉ် Lee က – ဘုရားသခင်ကသာငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်? » ခရစ်ယာန်တောင်းပန် & ထောက်လှမ်းရေးန်ကြီးဌာန
ဖေါ်ပြ: ခရီးစဉ် Lee က - ဘုရားသခင်ကသာငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်? | ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းတောင်းပန်၏ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း ApologeticsServants ၏အစေခံကျွန်
မိုက်ကယ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်အမှန်တကယ်ကအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, “ငါ့ကိုမစီရင်။”, အမှန်တကယ်စျကွောစီရငျဖြစ်ပါသည်.
တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါ, သင်တရားစီရငျ၏သူတို့ကိုစွပ်စွဲ……နည်းပညာပိုင်း, သင်သည်ထိုသူတို့စီရင်တော်နေကြတယ်. (ထိုအမှားယွင်းကြောင့်အနည်းဆုံးသူတို့ကိုစွပ်စွဲ)
ရိုးရိုးသားသား, သင်အလိုရှိပါလျှင်သင်တို့သည်ငါ့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူနိုင်ပါတယ်, ငါဆုံးမပဲ့ပြင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. (“မေတ္တာ၌မှန်ကန်သော”) ့အတိတ်အတွက်သို့မဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေမယ့်ဘာမှအားဖြင့်ငါ့ကိုမစီရင်.
သနားခြင်းကရုဏာ • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2014 တွင် 10:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဤအရာသည်အလွန်ပို့စ်ခဲ့. မကြာသေးမီက, ငါမဿဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ်7ဒါပေမဲ့မျိုးကအဓိပ်ပာယျသောအရာကိုမေ့. ငါတို့သည်အချင်းချင်းကူညီဖို့လိုအပ်ပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းကြမ်းတမ်းဖြစ်ပါဘူး. ငါလုံးဝသဘောတူ. ppl ကြမ်းတမ်းစွာသည်အခြား ppl ဝေဖန်မြင်နေကျိုးပဲ့အဆိုပါပြစ်တင်ဝေဖန်ခံစားမြင်နေ kinda ဝမ်းနည်းဒါဟာင်. အဆိုပါဝေဖန်သိသာစုံလင်သောမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့ကတောင်နားလည်သဘောပေါက်မထင်ရ. ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာင်. ကပိုကလူမဿဲအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် 7. ထိုအခါနောက်ဆုံးကျမ်းကြီး. ပြည်သူ့ပြင်ပမှာလူတိုင်းသူတို့အပေါ်မှာတံထှေးနှငျ့ထှေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းချင်သွားကြသည်မဟုတ်.
ကားရှိမုနျ • မတ်လ 12, 2014 တွင် 1:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး, ဖှယျစကားများ. ငါသည်သင်တို့၏ရေးသားချက်များမှ ပို. ဖတ်ပါဦးမည်! ;)
ဧပြီလ • မတ်လ 23, 2014 တွင် 11:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး!!! ဝမျးသာတစ်စုံတစ်ယောက် Final ဒီအပေါ်အမိန့်တော်ရှိ၏!!! ကိုယ့်ကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ဤအကြောင်းကိုငါ့အရုံးခန်းထဲမှာတစ်စုံတစ်ယောက်မှပြောနေတာခဲ့သည်!!!! အံ့သြစရာဘလော့ဂ်!!
Kyle • မေ 8, 2015 တွင် 9:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်တို့အဘို့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ကိုယ်ဘာမှများအတွက်မည်သူမဆို jugding မဟုတ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ. ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးစှဲလမျးသူတော်တော်များများကိုလူတိုင်းသင် jugdes နှင့်ဤတစ်နည်းနည်းနဲ့ဤလူသည်ယခုသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. အရာရာကိုသိသောကိုဆိုလိုသည်အဖြစ်. ပင်ဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုသင်၏ဂုဏ်နပြုပါသို့မဟုတ်သင်ပြုမူဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့သငျသညျအရာတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားရပုံကိုသင်ပြောပြပေမည်ပင်ဘယ်လောက်. ကိုယ့်ကိုတကယ်ကလူကဒီလုပျနိုငျကိုဘယ်လိုရ dont. ယင်း၏တကယ်မကောင်းတဲ့. ကိုယ့်ငါ့ကိုမုန်းသောထွက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်များစွာသောလူရှိပါတယ်ထွက်ရှာတွေ့လာကြပြီ, သူတို့တောင်မှငါ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းသို့ပေါ်လာအရာကိုထိန်းချုပ်ရန်လမ်းမရှိသော theres. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုသတိပြုမိသောအရာကို၏အကြောင်းရင်း occure စခွေငျးငှါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင် jugdment သင်ထင်အရာများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ထားရန်သုံးနိုငျ. သင်ရုံကောင်းသောအာရုံကိုပေးဆောင်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုတကယ်တော့ပြသသောနည်းနည်းအမှုအရာပေါ်တက်ကောက်နိုင်လျှင်သို့သော် jugding သောကွောငျ့ဖွစျသညျ? ပြီးတော့ယူဆချက်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်း theres. တစ်စုံတစ်ယောက် jugde ဖို့ဝေးနေဖြင့်အဆိုးဆုံးလမ်း. ကိုယ်ကရ dont. သင်ရုံသငျတို့ကွောငျ့, အချို့လုပ်ငန်းတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်သူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ dont သောဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်သော်လည်း (များသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်) အခြားသတင်းများထိုအခါငါခံစားမိရုံကိုဘယ်လို Hacking ကိုငါသညျပွုပါမညျ KNOW ကဘာလဲ. ၏သင်တန်းဤပုဂ္ဂိုလ်ကျရှုံးသိထားပြီးလျှင်, သမိုင်းနှင့်လိမ့်မည်ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ခံစားရပုံကိုတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြရန်, ထင်, သို့မဟုတ်ပြုမူသွား bullshit သည်မည်မျှရှိ. ယင်း၏အခြေခံအားဖြင့်မျက်စိကန်း jugdment. နှင့်လူတစ်ဦးယခု encompetant ခံစားရနှင့် wont ပင်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုငါကဲ့သို့သော, သူတို့သည်နောက်တဖန်သည်ဟုဆိုဘယ်တော့မှကြောင်းကိုလူတဦးဒါမှားပါသက်သေပြဖို့ guentee ပါလိမ့်မယ်. သင်မူကားနောက်တဖန်သင်ကိုယ်တိုင်အချိန်နှင့်အချိန်သက်သေပြသော်လည်း. တူညီတဲ့ယူဆချက်. အကြံအစည်? ကိုယ့်အားလုံးနေ့၌သွားနိုင်.
ဖေါ်ပြ: ခရီးစဉ် Lee က - ဘုရားသခင်ကသာငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်? - SOG- ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏အစေခံကျွန်
ဖေါ်ပြ: ဘုရားသခင်ကသာငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်… | ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြုံး